Vary misy oliva - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Vary misy oliva
-BARY46 minitraOlona 4
Matsiro tokoa! Amin'ity fomba fahandro ity dia mifangaro ny oliva maintso sy mainty tonga lafatra miaraka amin'ny vary.
Izy io koa dia a fomba fahandro vegan y mety amin'ny celiacs izay vita amin'ny legioma toy ny dipoavatra, tongolo na voatabia.
Ny sary mampihemotra an'ity matsiro sy lovia be ranony satria raha vao nanao aho dia nohaninay ary tsy nanam-potoana fakana sary azy.
Afaka naka sary an'ilay ampahany tavela ihany aho ary tsy hita intsony ilay ron-kena vao vita. Tsy olana tamiko izany, satria ny ampitso dia Niasa aho ary tsara toy ny vaovao ihany.
1 Vary misy oliva
Vary be ranony misy oliva maintso sy mainty.
Fotoana hiketrehana: 46M
Fotoana manontolo: 46M
200 g ny dipoavatra mena
Voatabia voajanahary 200 g (voatabia voajanahary voatoto no ampiasaiko)
Tongolo 100 g
Menaka 100 g
Paprika 1 sotrokely
1 l. ny rano
1/2 fandokoana sakafo na sotrokely
250 g ny vary
100 g oliva maitso
100 g misy oliva mainty
Ao anaty vera dia ampio ny dipoavatra, tongolo, tongolo lay ary voatabia voajanahary (raha mampiasa voatabia voajanahary avy ao anaty vilany isika, ampio io avy eo, miaraka amin'ny menaka).
Torotoro izahay mandritra 5 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 4. Ampidininay ny taolam-bolo sisa tavela amin'ny rindrina sy ny sarony ary apetaho amin'ny spatula, mankany amin'ny lelany.
Raha tiantsika ho potika kokoa izy io, dia manamboatra segondra vitsy hafa amin'ny hafainganam-pandeha mitovy isika.
Ampiarahinay ny menaka (sy ny voatabia voajanahary avy ao anaty vilany, raha io no ampiasainay) sy ny programa 15 minitra, maripana varoma, fihodinan'ny havia ary ny hafainganam-pandeha.
Mandritra izany fotoana izany dia mizara ny oliva ho tsiro telo isika. Namandrika izahay.
Aorian'ity fotoana ity dia ampianay ny paprika sy ny programa 15 minitra, maripana 100º, mihodina amin'ny havia sy ny hafainganam-pandehan'ny sotro.
Raha vantany vao manomboka ny fotoana voalamina dia ampidirintsika amin'ny rano ny nozera.
Rehefa vita ireo 15 minitra ireo dia ampianay ny fandokoana na ny turmeric ary ny vary. Izahay dia manao fandaharana 10 minitra, maripana 100º, mihodina amin'ny havia sy ny hafainganam-pandehan'ny sotro.
Ampio ny oliva, afangaro kely amin'ny spatula sy ny programa 5 minitra, maripana 100º, mihodina amin'ny havia sy ny hafainganam-pandehan'ny sotro.
Amin'ny faran'ity fotoana ity dia manandrana manarina ny sal-
Manolotra ny vary ao anaty casserole izahay ary manompo avy hatrany.
Fanazavana fanampiny - Salady vary miaraka amin'ny paoma sy voanjo
Loharano - Boky Vary Levante
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Vary sy Pasta, Celiac, Latsaky ny adiny 1, Vegan
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Vary sy Pasta » Vary misy oliva
76 hevitra, avelao ny anao
Salama misaotra amin'ny resipeo. Manoratra aho mba hanontany anao ny fitoviana eo amin'ny thermomix vaovao sy tranainy indrindra, izay ilay ananako. Misaotra anao
Mamaly an'i Almudena
Salama Almudena, ny Thermomix 21 no tianao holazaina? na ho an'ny antitra.
Loida dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray amiko tiako ny vary fa tsy ny ahy no ilaina amin'ny broth, ahoana no hataoko fa tsy misy broth?
Valiny tamin'i Loida
Salama Loida, ampio rano kely kokoa (heveriko fa miaraka amin'ny 850-900 gr. Ho lany ron-kena ianao, saingy tsy azoko antoka). Andramo ary lazao ahy. Mirary ny soa indrindra.
Toni dia hoy izy:
Salama Elena! Efa 2 taona teo ho eo aho no nanao an'ity vary ity ary mahatalanjona, ary koa ny ankamaroan'ny fomba fahandro am-bary izay ekeny ny fanampiana toy ny (mahia, saosisy, sombin'akoho, udd Avy amin'ireo izay mihinana tsara ny trondro, andao lazaina, ary mila mitady ny fomba anaovanao azy ianao, manamboatra sombin-trondro akoho kely ho azy aho ary mihinana azy tsy am-pisalasalana. Nasaiko nangataka kely ny tenako mba hilaza amin'ny vadiko sy ny rafozambaviko fa noho izy ireo tsy nahazo ny akora, fa tena tsara. Aza mamela hevitra, tsy midika izany fa tsy manaraka anao aho ary tsy manaova resipeo rehetra. Misaotra betsaka avy amin'ny fo. Manoroka ary hahita anao eo anelanelan'ny resipeo.
Valiny tamin'i Toni
Toni, faly aho fa tianao ireo fomba fahandro. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nanaraka anay.
Eva dia hoy izy:
Fanontaniana iray, manana ny TMX taloha aho, izay tsy manana ny fihodina ankavia. Raha ny zavatra azoko dia ampiasaina izy io mba tsy hokapaina ny lelany. Raha ny ahy, ny hafainganam-pandehan'ny sotro dia samy amin'ny hafainganana 1, 2 na 3. Satria tsy azo ovaina ny fihodinan'ny lelany, amin'ireto tranga ireto dia tsara kokoa ny mampiasa ny v ihany. 1, sa tsy izany? Misaotra!
Valiny tamin'i Eva
Salama Eva, tsy maintsy apetrakao amin'ny lolo ny lolo sy ny hafainganana 1. Raha tsy izany dia mitovy. Mirary ny soa indrindra.
Delphi dia hoy izy:
Inona no fomba fahandro mahaliana !!!
Toa tsara ity vary ity ... misaotra tamin'ny fandefasana azy!
Mamaly an'i Delfi
Mandrosoa ary andramo, Delfi. Tena matsiro! Oroka.
Salama Neus, vary matsiro izy io. Amiko tb. Mivoaka miaraka amin'ny ron-kena fa nohaninay toy ny nataoko ary naka sary lovia iray izay navelako aho ary ora roa no efa lasa. Oroka.
ny botika dia hoy izy:
Manana ny t 21 na zavatra toy izany aho hehehe ny refy sy izay rehetra mitovy na misy ny olana x izao ny vary nelva ny croquette fromazy manga sy ny broth dia tsy tadidiko hoe inona no nantsoina hoe nandeha tsara izy ireo tamin'ny fandrefesana azy dia ho an'ny zavatra rehetra mitovy fisaorana
Mamaly ny boty
Salama El Boty, ny hany zavatra miova dia ny tsy fisian'ny fihodinana havia na ny vel. sotro. Amin'izay ianao tsy maintsy mametraka ny lolo amin'ny lelany sy ny hafainganam-pandeha 1. Rehefa mikosoka toa ny anao isika dia vel. manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 ary amin'ny 31 dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 10, mila mametraka vel ianao. Kely kokoa. Miarahaba ary faly aho fa tianareo ireo fomba fahandro.
Shoes dia hoy izy:
Misaotra, miasa an'io aho, lazaiko anao
Mamaly an'i boty
Pabloc dia hoy izy:
Tsy nitsahatra namerina izahay mandra-pahatapitry ny.
Nanisy zucchini sy tsaramaso maitso hihinana legioma bebe kokoa aho.
Valiny tamin'i Pabloc
Tsara tokoa i Pabloc!. Faly aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
cicerone dia hoy izy:
Ny nenitoako dia nametraka oliva tao anaty vary foana, noho izany ny fahitana ilay fomba fahandro namerina fahatsiarovana mahafinaritra dia hataoko iray amin'ireo andro ireo, ary tiako koa ny vary misy lasopy. Misaotra tamin'ny pejinao.
Valiny ho an'ny cicerone
Manantena aho fa tianao izany, Cicerone. Miarahaba ary faly aho fa tianao ny bilaoginay.
Alba dia hoy izy:
Vitaiko izao ny fanomanana an'ity vary ity fa hitako fa tsy hita ny dingana fampidirana sira! na masira aza ny oliva dia tsy ampy ...
Nanisy sira aho tamin'ny dingana farany, dia ny an'ny oliva, hahitana ny fandehany ... Hitako tamin'ny fomba fahandro hafa fa ny sira dia asiana rano miaraka amin'ny rano mahandro ny vary, izay toa mitombina amiko. Andao hojerentsika raha efa nety tamiko izany !!
Valio i Alba
Manantena aho fa tianao izany, Alba. Amin'ny faran'ny recette dia apetrako fa hizaha toetra raha mila sira kely ary raha izany dia ampiantsika. Mila mitandrina ianao satria ny oliva manana sira betsaka ary izany no antony hanandramana azy amin'ny farany. Holazainao amiko raha tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
Tena tsara be ilay izy! Eny marina fa somary masira aho. Ny tena izy dia nanandrana azy aho tamin'ny dingana farany ary toa hitako fa tsy manandanja loatra ka nanampy sira betsaka aho. Tian'ny zanako lahy ihany na izany aza.
Ho an'ny rahampitso dia efa mila mandray miasa aho 🙂 Nanisy rano kely aho mba hampanan-karena azy. Tsara toy inona.
Faly aho, Alba!. Mirary ny soa indrindra.
Manankarena be. Misaotra anao fa mahazo tombony betsaka amin'ny themomix-ko aho, tsy omeko fialan-tsasatra. Rahoviana ny recette couscous? Heveriko fa tokony ho lasa tsara be io.
Misaotra betsaka anareo.
Valiny tamin'i Carmen
Salama Carmen, faly aho fa tianao ny fomba fanamboaranay. Ny recette couscous dia mandritra ny andro vitsivitsy, mieritreritra aho fa amin'ny volana febroary dia hamoaka fomba fahandro tena mahomby isika. Mirary ny soa indrindra.
JIMENA dia hoy izy:
Azoko atao ve ny manamboatra azy io manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny ampitso? Sa ho lafarinina be
Valiny amin'i JIMENA
Aleo atao amin'izao fotoana izao, satria raha tsy izany dia maina. Ny zavatra tsara dia vita vao vita ary tena matsiro. Mirary ny soa indrindra.
matanjaka amin'ny sakafo hariva?
Heveriko fa tsia, Jimena. Tsy matanjaka izy io. Mirary ny soa indrindra.
Bea dia hoy izy:
Androany dia vitako izany, saingy nanao hadisoana aho, nisakafo irery aho tamin'ny mitataovovonana, tena tsara, somary lehibe ny sakam-boasary, amin'ny fotoana hafa potipotika kokoa, ary navelako tao amin'ny thermomix ny zava-drehetra, sy ny mazava ho azy, tamin'ny alina ho an'ny sakafo hariva dia lasa. Mahamenatra Tokony hatao toy ny amin'ny fotsimbary, esory ary averina kely ajanony vao mahandro. Mirary ny soa indrindra
Mamaly an'i Bea
Izay ilay izy, Bea. Tsy maintsy esorinao amin'ny Thermomix izany. Na izany na tsy izany, ireny vary masaka vita amin'ny lasopy ireny dia vao maika tsara kokoa vao vita, avy eo malaina. Tiako ihany ary amin'ny ampitso dia entiko hiasa mandritra ny sakafo atoandro. Mirary ny soa indrindra.
Belén dia hoy izy:
Omaly nataoko ary tsara fa tsy tsara, vita vao mafana ary nafanaina taty aoriana, fa navoakako raha vantany vao vita tao amin'ny thermo aho ary be ranony nefa tsy nandeha intsony, averiko azo antoka
Valiny ho an'i Betlehema
Faly aho, Betlehema! Tiako be koa io. Mirary ny soa indrindra.
Marien dia hoy izy:
Elena matsiro! Toy ny mahazatra ny lovia vary tsy mampino miaraka amin'ny Thermo. Haveriko tsara. Oroka
Valiny tamin'i Marién
Faly aho fa tianao izany, Marién!. Mirary ny soa indrindra.
Alicia dia hoy izy:
Salama. Misaotra betsaka noho ireo hevitra izay raisinao ho an'ny lakozia. Tiako ity vary ity. Somary sarotra tamin'ny fianakaviako ny nihinana ny oliva tamin'ny lovia mafana. Amin'ny manaraka dia hanandrana makamba aho, izay tsy maintsy mandeha tsara.
Valiny tamin'i Alice
Salama Alicia, azonao atao amin'ny alàlan'ny saro-pantarina ity recette ity na jereo ny fomba fahandro "vary misy moanina sy vono", matsiro. Napetrako ny rohy: http://www.thermorecetas.com/2010/04/25/Receta-Thermomix-Arroz-con-rape-y-gambas/
ROSANA dia hoy izy:
Salama, tiako ireo fomba fahandro nataonao noho izy ireo, nanomboka nampiasa bebe kokoa ny thermimox aho satria nanao an'io paradisa io aho ... saingy manana 21 aho ary tiako izany rehefa apetrakao ny ilany havia dia hazavao amiko ny fomba tsy manana izany. sa ireo recette tsy azoko atao amin'ny thermomix-ko? Misaotra anao
Valiny amin'i ROSANA
Salama Rosana, mazava ho azy fa vitanao izany. Rehefa miteny izahay hoe mihodina miankavia, dia tsy maintsy apetahoo amin'ny lolo ny lolo. 1. Mandrosoa ary ampiasao, mendrika izany. Mirary ny soa indrindra.
Marina izany! ... dia nohaninay omaly ary matsiro ... ary tiako koa ny manampy veromanitra voasarimakirana amin'ny tanimbary ary averiko sy ny vadiko. Nandany vola kely ny ankizy tamin'ny voalohany noho ny fisian'ny oliva, fa rehefa nanandrana izy ireo dia tiany.
Misaotra…. Hanohy hanadihady amin'ny pejinao aho
Faly aho fa tianao izany, Jimena!. Mirary ny soa indrindra.
kitapom-bola dia hoy izy:
Salama, izaho dia vao manomboka amin'ity iray volana mahery ity izay ananako ilay masinina ary tena faly aho. Saika isan'andro no ampiasako azy. Ny andro hafa nataoko ity fomba fahandro ity dia nivoaka tsara izy, tsy nanao izany aho Tsy nametraka oliva mainty aho satria tsy nanana aho, saingy nasiako cubes ham sy pilina tahiry legioma. Fahombiazana rehetra. Misaotra anao noho ny resinao, tohizo toy izao. Oroka iray.
Mamaly an'i jareta
Faly aho fa tianao izany, Jareta!. Fiovana tsara dia tsara avy amin'ny oliva mankany amin'ny tacos ham. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
marcelina dia hoy izy:
Salama, izaho dia mpanaraka, tena tiako ny resinao, ny vary misy oliva dia efa antitra loatra noho ny tsiroko, 21 taona aho
Mamaly an'i marcelina
Salama Marcelina, azafady fa malahelo anao ianao amin'ny manaraka, apetraho kely minitra vitsy. Miaraka amin'ny Tm21, mila mametraka minitra vitsy ianao .. Fiarahabana.
Shell dia hoy izy:
Salama!! Ao an-tranoko, ny andro vary dia asabotsy satria io ihany no andro amin'ny herinandro izay mihinana daholo isika amin'ny fotoana iray. Tamin'ny herinandro lasa izahay no nanao oliva ity iray ity ary nivadika ho tantara ratsy izany. Androany izahay dia nanao ny trondro tuna ary tsara tarehy ihany koa. Misaotra anao nizara ireo recette tsara, tsotra sy mahasalama miaraka amin'izay. Tohizo izany azafady, ho mpanara-dia mahatoky aho raha eto ianao. Miarahaba.
Mamaly an'i Concha
Faly aho fa maro no tianareo izy ireo!. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Elisa dia hoy izy:
Nataoko ny fomba fahandro ary mivoaka tsara, dia fahombiazana, tian'ny rehetra izany, misaotra anao noho ny resinao, arahaba.
Valiny tamin'i Elisa
Faly aho Elisa!. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Mamiavila dia hoy izy:
Miomana dieny izao aho !!!!!! Hotantaraiko anao izany fa mamerovero tsara ary tsy misy loto ao an-dakozia ……. Io no vary voalohany nataoko tamin'ny thermos… .. Misaotra anao
Mamaly an'i Mamiavila
Efa azontsika io …… tena tsara fa andro hafa dia hofeheziko ny paprika !!!!! Misaotra betsaka indrindra !!!!! Mahagaga ny fomba fiasanareo ary miaraka amin'ny ankohonana ny asa sy ny zavatra rehetra… .Tsy niverina aho hijery bilaogy hafa !!!!! Oroka hoanareo roa
Misaotra betsaka anao Mamiavila!
María dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao dia ataoko izany. Tianay ny vilia vary ary tena tsara ity iray ity.
Manantena aho fa toa tsara toa anao io.
Miarahaba anao !! Ny bilaogy dia 10 !! Tiako ireo resipeo apetrakao ary adikao isaky ny afaka manao izany aho.
Valiny tamin'i Maria
Misaotra betsaka, Maria! Miarahaba ary faly aho fa tianao ny bilaoginay.
Juana mary dia hoy izy:
Ity vary matsiro ity !!! Toa tsy mampino, inona no fomba fahandro mahaliana, satria hitako fa te-hanao azy aho ary ahoana no fomba hafa, tsy nandiso fanantenana ahy izany! Tsara tokoa raha ao an-trano no tiako be ary dia gaga ihany koa. Misaotra indray ny zazavavy
Valiny tamin'i Juana Mary
Faly be aho Juana Mary!. Miarahaba anao ary misaotra anao nahita anay.
Mila dia hoy izy:
Salama!! Rahampitso dia te-hihinana an'ity vary ity aho, hanao ahoana izany raha soloiko ny safidin'ny safron? Misaotra anao!!
Mamaly an'i Mila
Salama Mila, azo antoka fa toa tsara aminao ity. Saffron manome tsiro tena manan-karena. Mirary ny soa indrindra.
Miriama dia hoy izy:
Androany maraina dia nanao an'ity vary ity aho ary nitondra tuper hiasa. Mahafinaritra! Ary ny tsy fisian'ny oliva maintso ary nasiako mainty ihany ary koa ny tsy fananany dipoavatra mena no nahavitako azy tamin'ny maintso. Averiko tsara ilay recette. Fanontaniana iray, adinonao ve ny manampy ny sira amin'ireo akora sa tsy hita?
Mamaly an'i miriam
Salama Miriam, amin'ny faran'ny resipe dia milaza aho fa mila manandrana ianao hahitana raha mila sira kely izy, manome oliva betsaka amin'ny lovia ny oliva ary matetika tsy ilaina ny manampy fanampiny. Miarahaba ary tena faly aho fa nankafizinao izany.
Nanao hadisoana aho ary nametraka ilay mailaka ho anarana, azafady esory izany.
Salama Miriam, mandeha tsara izany. Mirary ny soa indrindra.
Ao amin'ny hafatra teo aloha dia manana ny adiresy mailaka ho anarako aho, esory izany.
Salama Miriam, heveriko fa efa nesorina io. Mirary ny soa indrindra.
Immaculate Fernandez dia hoy izy:
Salama Elena, tiako ho fantatra hoe inona ny karazana vary ampianao amin'ity resipeo ity satria tsy mivoaka tsara ny vary, na mivoaka antitra, na miraikitra dia tsy mivoaka malalaka izay no itiavako azy. FIARAHABANA
Valiny tamin'i Inmaculada Fernández
Salama Immacualda, mampiasa varimbazaha lava aho ary manokana ny an'ny marika SOS. Amiko dia mety ihany ny vary ao anaty Thermomix iray. Mirary ny soa indrindra.
Salama, androany no nanamboarako ny vary hisakafoanana antoandro ary tena fisehoan-javatra mety izany, saingy niraikitra tamin'ny vera izany, mahazatra ve izany? sa mety nisy zavatra tsy nety nataoko? . Misaotra anao . FIARAHABANA
Salama Immaculate, heveriko fa diso ny nataoko, tsy miraikitra amiko io, inona koa fa lasopy. Ao amin'ny sary dia tsy tazana izany satria efa elaela aho no nanao an'io dia maina. Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena, angamba tsy nahetsika tsara aho "satria mangatsiaka be ho ahy koa io, hataoko indray amin'ity herinandro ity, fa hosoloako poti-kazo tsy misy fotony kosa, hainao fa hoy ny reniko foana" Nihalehibe tamina vary amam-bary miaraka amina cod sy chubby criastes aho! "Manodidina anao eto dia mihinana vary, cod ary ovy be dia be ianao. Hey, tena tiako ny soso-kevitrao sy ny fomba fahandro anao. fiarahabana
Tsara tokoa, Immaculate!. Manantena aho fa manankarena be izany, hoy ianao amiko. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
messenger dia hoy izy:
Tena tsara ity recette ity, ny tena izy dia lafatra ny vary ao anaty thermomix, nasiako holatra holatra koa
Faly ianao, ry Mensa! ary fandraisana anjara tena tsara ny holatra. Mirary ny soa indrindra.
risell dia hoy izy:
Ataoko foana ity vary ity ary mahafinaritra be, amin'ny fomba tsy ananan'izy ireo ny fomba fahandro ny vary Abanda, adala aho mitady azy fa tsy hitako amin'ny thermomix
Mamaly an'i risell
Salama Risell, tsy manana resipeo aho fa hiezaka hitady azy. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra anao, miandry aho, tiako ny manao azy amin'ny thermomix
Anna dia hoy izy:
Loza inona… Vao tsy ela akory izay no nahazoako ny TM-21 izay nomen'izy ireo ahy faharoa. Ary omaly aho no nanamboatra recette vary voalohany ... ary namoizana ain’olona, ​​efa maina tanteraka ny vary, toy ny paty! Manoratra aminao aho raha azonao atao ny manampy ahy hahafantatra izay tsy nety nataoko, manana hevitra vitsivitsy aho:
1) Toy ny TM21 napetrako ny lolo hatramin'ny fotoana niresahanao ny "fihodinana havia", dia mitovy ny hafanana, fa ny hafainganana 1. Marina ve izany? Avy eo nandeha tany amin'ny maripana 100º sy ny hafainganana 1. Ary toy izany koa ny ambin'ireo fomba fahandro. Nisy fotoana tsy maintsy nanaovako sarona satria ny rano nanondraka avy teo amin'ny sisin'ny labiera ... saingy tsy dia maninona aho ...
2) Rehefa avy nametraka ny oliva tamin'ny dingana farany aho ary talohan'ny nahandro ny 5min farany dia nisy olana teo amin'ny tohatra ary tsy teo mandritra ny 15 minitra aho no tsy teo…. Rehefa tonga aho dia nijery ny vary ary soggy tanteraka…. Heveriko fa izany no antony, marina? Heveriko fa tokony ho namoaka azy avy hatrany aho ...
Ny tsiro dia tsara ... ny firafiny ... porridge izy ... Na izany na tsy izany, te-hanandrana indray aho sao manala ny tsilo. Ny zoma dia hanao ny risotto anao aho satria manana olona hisakafo hariva aho fa tsy sahy .. Sniff
Tsara ny salmorejo ... andao jerena raha maharesy ny loza ara-bary aho
Valiny tamin'i Anna
Salama Anna, miaraka amin'ny Tm21 tsy maintsy apetrakao ny hafainganana sy ny maripana kely kokoa. Heveriko fa izany no nahatonga azy nivadika ho holatra. Rehefa vita dia tsy maintsy esorina izy io mba tsy hanao mofomamy ary hihinana azy avy hatrany. Mandrosoa amin'ny risotto, matsiro izy. Mirary ny soa indrindra.
Fomba fahandro fototra: dibera tongolo lay
Salady amin'ny zavokà miaraka amin'ny akanjo vita amin'ny voasarimakirana